घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू अंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरू एडेमोला लुकम्यान बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो अडेमोला लुकम्यान जीवनीले तपाईंलाई आफ्नो बाल्यावस्थाको कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी हुनु, जीवनशैली, व्यक्तिगत जीवन र नेट वर्थका बारे तथ्यहरू बताउँदछ।
संक्षेपमा, हामीसँग वान्ड्सवर्थ मूलको अंग्रेजी फुटबलरको संक्षिप्त इतिहास छ। लाइफबगरले लुकम्यानको कथा उसको शुरुको दिनदेखि सुरु गर्दछ जब सम्म ऊ फुटबलको सुन्दर खेलमा प्रख्यात भए।
अडेडोला लुकम्यानको बायोको आकर्षक प्रकृतिमा तपाईंको आत्मकथा भूखलाई छेड्न, उसको क्यारियर प्रलोभनको दृश्य हेर्नुहोस्। यो उनको कथा सही बताउँछ?
एडेडोला लुकम्यानको जीवनी।
हो, सबैलाई थाहा छ कि ऊ रचनात्मक र अत्यधिक प्राविधिक हो ... एक फुटबलर सन्तुलन, ट्रिक्री, एक्सेलेर र फुर्तिलोको आशिषले। यस सम्मानको बावजुद, केवल थोरै प्रशंसकहरूले एडेमोला लुकम्यानको जीवन कहानीको संक्षिप्त संस्करण पढेका छन्। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
अडेमोला लुकम्यान बचपन कहानी:
जीवनी शुरुवातकर्ताहरूको लागि उनी उपनाम मान्दछन् - मोला। उसको वास्तविक वा पूरा नामहरू हुन् - Aেমोडोला लुकम्यान ओलाजादे अलाडे आयलोला लुकम्यान। अ foot्ग्रेजी फुटबलर अक्टुबर १ 20 1997 XNUMX को २० औं दिनमा लन्डनको वान्ड्सवर्थ शहरको नाइजेरियन आमाबाबुको जन्म भएको थियो।
सानो छँदा मोलाले आफूलाई फुटबल खेलहरू हेर्ने लतमा डुबायो। उनी विशेषतया एभर्टनको गुडिसन पार्क जस्तै केही प्रिमियर लिग टोलीहरूको वातावरणको साथ आकर्षित थिए। बाल्यकालका साथीहरूसँग फुटबल खेल्दा पनि उसको खेल विकासको जग खडा भयो।
किशोरावस्थामा जानुभन्दा पहिले अडेडोला लुकम्यानका आमाबुवाले परिवार बसाई सरेका थिए - उनको जन्म स्थान वान्ड्सवर्थबाट लन्डनको पेकाममा। लन्डनमा बस्नको लागि सब भन्दा खराब ठाउँहरू ठानिने अप्ठ्यारो छिमेकमा ती युवा बढे।
अडेडोला लुकम्यान नाइरा मार्लेको घर पेकेममा हुर्किए।
पेकम, जहाँ लुकम्यान हुर्केका थिए, दक्षिण लन्डनको एउटा जिल्ला हो, साउथवार्कको बरो बीच। क्षेत्र हिंस्रक युवा अपराधको लागि प्रसिद्ध छ। धन्यबाद, फुटबलर, उनको घरका सदस्यहरू सहित कहिले पनि यसको एक हिस्सा थिएन।
अडेडोला लुकम्यान परिवार पृष्ठभूमि:
पेक्काम मूल निवासी नाइजेरियाका अभिभावकहरू हुन् जो रोचक लन्डनवासीहरूको समूहसँग सम्बन्धित छन्। सरल भाषामा भन्नुपर्दा, मिडियाले एडेमोला लुकम्यान बुबा र आमालाई कडा, हास्यास्पद, स्यासी र धेरै शिक्षित व्यक्तिहरूको रूपमा वर्णन गर्दछ। उनी लन्डनर एक मध्यमवर्गीय परिवारबाट आएका थिए र उनको बाल्यकालमा कहिल्यै अभावको सामना गरेनन्।
अडेडोला लुकम्यानका आमाबुवाहरूले नाइजेरियाको संस्कृतिलाई उच्च सम्मानका साथ परम्परागत घर चलाउँथे। तिनीहरू त्यस्तो प्रकारका हुन् जसले आफ्ना बच्चाहरू वकिल वा लेखाकार बन्न चाहेका थिए र फुटबलरहरू होइन।
तलको भिडियोमा, हामीले याद गर्यौं कि त्यो बालकले आफ्ना आमाबाबुको पहिलेको आशाको वरिपरि भेट्ने उपाय फेला पारे - जुन उनीहरूले पहिले आफ्नो छोरालाई जीवनमा बिताउन चाहेका थिए।
अडेडोला लुकम्यान परिवार उत्पत्ति:
पहिलो कुरा, हामी तपाईंलाई उहाँको नामको अर्थ बताउनेछौं। एडेमोला नाइजेरियाली योरूबा मूलको उपनाम हो जसको अर्थ हो 'राजा / मुकुट / रोयल्टी संग धन'। कुनै तर्क बिना, उहाँ नाइजेरियाबाट आफ्नो परिवारको जरा छ। यो पश्चिमी अफ्रिकी देश हो जुन पृथ्वीको सबैभन्दा कालो मानिसहरु हुन्।
यो नाइजेरियाको नक्शा हो जसले एडेमोला लुकम्यानको परिवारको मूलको व्याख्या गर्दछ।
अडेडोला लुकम्यानका अभिभावक नाइजेरियाको दक्षिण पश्चिमी भागबाट आएका हुन्। तिनीहरू तलका कुनै पनि राज्यहरूबाट हुन सक्छन्; लागोस, ओयो, ओगुन, ओसुन, एकिती वा ओन्डो। फुटबलर आफैं, लन्डन ब्ल्याक अफ्रीकी जातीय हो।
अडेडोला लुकम्यान शिक्षा:
लन्डनमा धेरै बच्चाहरु जस्ता नाइजेरियाली परिवारमा जन्मनु, स्कूल जाने सधैं अनिवार्य थियो। अडेमोलाले उनका बाबुआमाले दिएको निर्देशन पालना गरे। स्वतन्त्रका अनुसार, उनले यस स्कूलमा भाग लिए, सेन्ट थॉमस पेकेहमको अपोस्सल कलेज।
अडेमोला पेकेमको सेन्ट थॉमस अपोस्सल कलेजमा उनको सेटको सबैभन्दा चतुर विद्यार्थी थिए।
पछि स्कूलमा, अडेमोला यति बुद्धिमान केटा थिए जसले दुवै शिक्षाविद् र फुटबलको साथ बहु-कार्य गर्न सक्थे। के तपाईंलाई थाहा थियो? ... उसको संज्ञानात्मक क्षमताले उसलाई GCSE मा तीन A * s र पाँच हासिल गर्दै गरेको देख्यो।
अडेडोला लुकम्यान फुटबल कथा:
हाम्रो केटा मात्र स्कूल गए ताकि ऊ आफ्ना बाबुआमाको इच्छालाई सम्मान गर्न सक्छ। वास्तविक अर्थमा, सबै एडेमोला हुन चाहन्थ्यो - एक पेशेवर फुटबलर बन्ने थियो। शिक्षाको लागि खोज कहिले पनि सम्झौता गरिएको थिएन - शुरूमा। अंततः, यसले युवालाई खेलको लागि कम समय लिन बाध्य तुल्यायो। अर्टर टु मल्टिटास्कमा, मोलाले आइतवार लिग फुटबलको लागि दर्ता गर्‍यो Dele Alli गर्नुभयो।
सत्य यो हो कि पेचेम मूल निवासीले प्रायः सबै बच्चाहरूले एकेडेमीमा बिताएको जीवनको आनन्द उठाएनन्, जहाँ उनीहरूले of वर्षको उमेरमा फुटबल ब्याग गरेका थिए, भर्खरको किशोरावस्था पछि, लुकम्यानले वाटरलू एफसीमा भर्ना गर्यो - व्यस्त स्कूली बच्चाहरूलाई खेलकुद दिन समर्पित स्थानीय टोली। मौका।
१ 14 वर्षको उमेरमा, त्रासदी (मित्रको मृत्यु) ले एडेमोलालाई महानतामा प्रेरित गर्‍यो। यो एक समय थियो जब अडेमोलाले अन्वालु नामका टिमलाई हराए। उसको साथीको अचानक मृत्यु नियन्त्रण गर्न साँच्चै गाह्रो थियो तर धन्यबाद, यसले उसको टोलीलाई साथ ल्यायो।
अडेमोलाले आफ्नो पहिलो क्लबमा एक साथी गुमायो। त्यो दु: खपूर्ण घटना उनको टीमलाई सहयोग गर्न गयो।
यो कत्ति दर्दनाक भयो, एडेमोलाका टिमका साथीहरूले मृतकको सम्मानका साथ फुटबलमा सफल हुनको लागि के गर्ने भनेर कसम खाए। त्यस दिनदेखि, केटाहरूले सँगै लडे, उनीहरूले पहिले खेलेका खेलहरू हराएनन्। धन्यबाद, तिनीहरूले आफ्नो ढिलो टिम साथीको लागि सफलता प्राप्त गरे।
एमेच्योर फुटबलको साथ प्रारम्भिक जीवन:
अप्रिल २०१ 2014 को आसपास, चार्ल्टन एथलेटिक अण्डर १ss के एक राम्रो मौसमको रूपमा देखा पर्‍यो। उनीहरूको फिक्स्चर बीचको लामो ब्रेकको कारण, क्लबले उनीहरूको खेलाडीहरूलाई बढी मिनेटहरू दिन केही थप खेलहरू (फ्रेंडलीहरू) आयोजना गर्ने निर्णय गर्यो।
चाल्टनले स्वागत गरे लन्डन एफए U-16 उहाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्न। यो स्थानीय आइतबार लिग पक्षका समग्र एमेच्योर फुटबलरहरूको टोली हो। उनीहरूसँग अडेडोला लुकम्यान नामको थोरै १ 16 बर्षे वि win्गर थियो जो वाटरलू एफसीबाट सामिल भए।
त्यो मैत्रीपूर्ण खेलमा, अडेमोला लुकम्यान ठूलो खेलाडीमा पिचमा सर्वश्रेष्ठ खेलाडी बने। प्रारम्भिक विकल्पको रूपमा आउँदै, हाम्रो केटाले धेरै बहादुरी देखायो। उसले आफ्नो चम्किलो चाल / ड्राबिलिंग प्रयोग गरेर लगभग सबै चाल्टनका सबै खेलाडीहरू लिन थाल्यो।
जबकि कुनै शरीर थाहा थिएन, त्यस खेलको सार चाल्टोनको लागि एडेडोला लुकम्यानलाई स्काउट गर्नका लागि थियो र फुटबलरलाई कहिले थाहा थिएन। प्रभाव पारे पछि, उनका एक साथीले यसो भन्दै उसको कुराकानी गरे;
भाई, मलाई लाग्छ तपाईं यो मेलको कारण हुनुहुन्छ। मैले तपाईलाई भित्र पसेको बित्तिकै चिच्च्याएको मैले याद गरें। म यो महसुस गर्न सक्छु। अडेमोलाले जवाफ दिए… मलाई ??… र उसको साथीले भन्यो हो !!
अडेमोला लुकमेन जीवनी - फेम कहानी कहानी।
खेल पछि, हाम्रो केटाले इनहाउस ट्रायलको लागि आमन्त्रित गर्यो, जुन उसले उडान रंगमा पार गर्यो। चार गोल गर्ने उत्कृष्ट प्रदर्शनको कारण, चालटनले उसलाई प्राप्त गरेन। क्लबले एडेमोला छात्रवृत्ति प्रदान गर्‍यो।
एक वर्ष भित्रमा, युवा पहिलो टीमको लागि डेब्यू गर्न तयार थियो। जब उनीहरूले पहिलो खेलको लागि तयार हुन एडेमोलालाई बोलाए, उनी धेरै स्तब्ध भए, यो सोचे कि यो कोचलाई जनाउँदै हुनुहुन्थ्यो।
अफर तिनीहरूले त्यो एक हो भनेर पुष्टि गरे, हाम्रो केटाले आफ्ना शिन प्याडहरू खोजी गर्न थाले यो थाहा थिएन कि यो उसको प्रशिक्षण ज्याकेटको खल्तीमा थियो। चाल्टन कोचले उसलाई केवल आत्मविश्वास भएको र आफैलाई स्वाभाविक रूपमा व्यक्त गर्न भने - जुन उसले गर्यो। धन्यबाद, लुकम्यान एक ब्रेकआउट स्टार बने, जो मनपर्‍यो वेन रोनी। आफ्नो प्रारम्भिक अनुभवको बारेमा बोल्दै मोलाले एक पटक भने;
धेरै परिश्रमी भएकोले, एक फुटबलर जसले एकेडेमी फुटबलको स्वाद कहिल्यै पाएनन्, तर आफ्नो बुद्धिमत्तालाई प्रतिद्वन्द्वीलाई परास्त गर्न प्रयोग गर्‍यो, एडेमोलालाई आफ्नो पहिलो क्यारियर पुरस्कार प्राप्त गर्न बोलाइयो। शिक्षा र फुटबलमा उनको उपलब्धि को कारण, उसले २०१-2015-२०१ L LFE अप्रेंटिस अफ द इयर पुरस्कार प्राप्त गर्‍यो।
प्रारम्भिक अंग्रेजी विजय:
यस समयमा (२०१ 2016), एडेमोला लुकम्यानको परिवारको आनन्दलाई कुनै सीमा थिएन किनकि उसले इ England्ल्यान्ड यु १ squad टीमको लागि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय कल-अप प्राप्त गर्‍यो। अर्को वर्ष (२०१ 19), लुकम्यानले नाइजेरियामा बफादारी स्विच गर्ने अवसरलाई अस्वीकार गरे - उनको बुबा र आमाको देश।
अ football्ग्रेजी फुटबलमा आफ्नो नाम घोषणा गर्नु अघि, लुकम्यानको ड्राईभ र दृढ संकल्प उसको सबैभन्दा बहुमूल्य सम्पत्ति थियो। आफ्नो देशको सब भन्दा छिटो उठ्दो ताराहरू मध्ये एक भएको कारण उनीले २०१ 20 फिफा यू -२० वर्ल्ड कपमा इ England्ल्यान्ड अण्डर २० प्रतिनिधित्व गर्ने छनौट गरेको देखेका थिए।
त्यो प्रतिष्ठानले इंग्ल्याण्डलाई त्यस अवसरमा उदाएको देख्यो। Spurs 'सँगसँगै विशेषता केली वाकर-पीटर, आर्सेनलको एन्सेले मेटलल्याण्ड-नेइल्स र एभर्टनको डोमिनिक क्यालोभ-लेभिन (केहि नामको लागि), एडेडोलाले तीन गोलले इ England्ल्यान्डलाई ट्रफी जित्यो।
इडेन्डोला लुकम्यानको इ moment्गल्यान्डको महिमा क्षण
अडेडोला लुकम्यान बायो- सक्सेस स्टोरी:
टूर्नामेन्ट पछि उदाउँदो स्टारका लागि धेरै अवसरहरू खोलिए। तीन वर्ष भन्दा कममा चाल्टनसँगै, एडेमोलाले एभर्टनमा ११ मिलियन डलर ट्रान्सफर प्राप्त गर्‍यो। धेरैलाई सुपरिवेसन गर्दै, यो फुटबलरका लागि ज्यादै दुर्लभ कहानी हो जसले NO WHERE बाट शुरू गरे (आइतवार लिग फुटबल) यति छोटो समयमा।
चाल्टन एथलेटिकको साथ सुरुका दिनहरू र एभर्टनमा सम्मिलित हुँदै, एडेडोलाले एक पटक अन्तर्वार्तामा आफ्नो अनुभव साझा गरे। यसले हामीलाई बताउँछ कसरी टोफी (अन्तर्गत) रोनाल्ड कोमान) उसको एक खेल हेर्न आउँदा उनी डराए जब उनी घाइते भए।
एडिमोलाले तुरुन्तै प्रशिक्षणको पहिलो दिनदेखि नै एभर्टन टोलीसँग सम्बन्ध राख्यो। उनी टफिजको फ्लुउड फुटबलको कदर गर्दछन् र आफ्नो इ England्ल्यान्डका केहि टीमका साथीहरू जस्तै नजिकका भए टम डेभिस.
आफूलाई मनपर्दोको बिरूद्ध खेल्ने फेला पार्दै Yaya Toure र सर्जियो अगुरो अडेमोलालाई विश्वास गर्न गाह्रो लागेको केही चीज थियो। हो, उसले एक प्रीमियर लिग पहिलो सपनाको सपना देख्यो तर कहिल्यै विश्वास गरेन कि यो यति चाँडो आउनेछ। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, हाम्रो केटाले पहिलो खेलमा गोल गर्यो जब उसको टोलीले म्यान सिटीलाई हरायो।
आरबी लाइपजिग कथा:
बोरा पछ्याउँदै रोनाल्ड कोमान, अडेमोलाले महसुस गरे कि उनलाई केही विदेशी अनुभव चाहिएको छ। उनले डर्बीलाई ingण दिने सम्बन्धमा अल्लार्डिसको निर्णयलाई अस्वीकार गरे, बरु त्यस ठाउँमा जानका लागि प्राथमिकता दिए राल्फ HasenhüttlRB Leipzig।
जर्मन पोशाकमा एक सफल loanण जादूको पछि उनले पहिलो पदक विजेता (जसरी तलको भिडियोमा छ), एडेडोला चाँडै लाइपजिगका फ्यानहरू मनपराउँथे। उनको सेवाको लागि मान्यता प्राप्त क्लबले उनलाई स्थायी आधारमा हस्ताक्षर गर्‍यो।
COVID को प्रकोप पछि, लन्डन निवासी आफ्नो परिवारको नजिक रहन तुरुन्त आवश्यकता महसुस गरे। यसैले September० सेप्टेम्बर २०२० मा, अडेमोला प्रीमियर लिग साइड फुलहममा सामेल भए, जुन उसको शैली सुइट थियो र आफू हुर्केको ठाउँमा नजिक थियो।
लन्डन पक्षमा सामेल भएदेखि एडेडोलाले पछाडि फर्केर हेरेन। उसले एक शानदार छलांग, अधिक दृढ मनोवृत्ति र ठूलो आत्मविश्वास देखायो। यो प्रदर्शन, हप्तामा एक हप्ता बाहिर, फुल्हमलाई उनीहरुको अवधारणाको लागि इन्जेक्शनको एक इन्जेक्शन दिदै गरेको छ
कुनै श doubt्का बिना, अ English्ग्रेजी फुटबल प्रशंसकहरु अर्को युवालाई सुप्राइ कल गरीरहेको अवलोकन गर्नै छन् गेरैथ साउथेटइ England्गल्यान्ड जुनसुकै पट्टि पनि बाहिर आयो, हामी उहाँलाई शुभकामना दिन्छौं। बाँकी, हामी उनको बायो को भन्छौं, ईतिहास हुनेछ।
एडेमोला लुकम्यान प्रेम जीवन - प्रेमिका, पत्नी, बच्चा?
एक विशाल सफलता कहानी संग, उनले प्रिमियर लिगमा आफ्नो लागि नाम बनाएको तरिकामा देखेझैं, पेचेम मूल निवासीको लागि एउटा कुरा निश्चित छ। वास्तवमा भन्ने हो भने, धेरै प्रशंसकहरू घायल भएका छन् यदि एडेमोला लुकम्यानको प्रेमिका छ वा कोही उसले आफ्नी पत्नीलाई ठान्छ भने।
एडिमोला लुकम्यान डेटि Who को हो?
आफ्नो नाइजेरियाकी आमा र बहिनीको बाहेक, सम्मानित फुलहम ड्रिबलरसँग कोही छैन जो आफ्नो जीवनी पूर्ण बनाउँदछ। अर्को सोचमा, एडेमोलाको एक प्रेमिका हुन सक्छ तर कमसेकमको लागि, आफ्नो सम्बन्ध सार्वजनिक बनाउन इन्कार गर्दछ।
एडेमोला लुकम्यान एक शान्तिमय र निष्पक्ष दिमाग वाला मानवीय जीवन हो, जो एक तुला राशि चक्र हस्ताक्षर का चिह्नहरू छन्। उसको जिब्रो र रचनात्मक प्रकृति दुवै दुबै पिचमा र बाहिर छ। फेरि, केहि फिर्ता पाउने आशा नगरी मानिसहरूलाई सहयोग गर्ने उसको जन्मजात इच्छाले उसको व्यक्तित्वको बारेमा धेरै भन्छ।
पेकेमको सेन्ट थॉमस अपोस्सल कलेजमा रहेको उनको सेटमा उनी सबैभन्दा चतुर विद्यार्थी थिए भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै हामी लुकम्यानलाई उनको लुकेको मनोभाव पछ्याएको देखेर छक्क लाग्दैन। यो कुनै कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई सिकाउने बाहेक। एडेमोलाले साना बच्चाहरूलाई समर्थन गर्न मन पराउँछन् र हामी उनको एभर्टनसँगको समयमा पत्ता लगाउँदछौं।
यदि फुटबलले काम गरेन भने, हामीलाई निश्चित छ कि एडेमोला लुकम्यान एक शिक्षक बन्नेछन्।
लिभरपूलस्थित इन्ट्रिक स्कूलको सेन्ट एन्ड्र्यूको माघल सीका विद्यार्थीहरू आफ्ना नम्र शिक्षकलाई बिर्सन हतारमा हुने थिएनन्, जसले व्यस्त क्यारियर तालिकाको बाबजुद पनि उनीहरूलाई भेट्न आउने र सिकाउने समय पाउँथे।
फुटबलबाट टाढा, एडेमोला लुकम्यानसँग पनि हास्यको ठूलो अनुभूति छ। यस भिडियोमा, हाम्रो केटालाई साथी नाइजेरियाली भाइसँग भेटिएको छ, Fikayo Tomori, आफ्ना टीमका साथीहरूको बारेमा चुटकुले बनाउने र सँगै केहि राम्रो हाँस्दै।
उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुराको थाहा छैन, सडकमा एडेमोला लुकम्यानलाई भेट्नुभयो भने तपाईं सोच्नुहुन्छ कि उहाँ एक औसत लण्डनका हुनुहुन्छ। यो उनको नम्र व्यक्तित्व को चिन्ह हो। सत्य कुरा के हो भने, हरेक वर्ष आफ्नो बैंक खातामा जाने लाखौं पाउन्डको बावजूद एडेमोलासँग एकदमै थोरै मानसिकता छ।
हेर्नुहोस् जो प्रत्येक वर्ष २2.6 लाख .० हजार कमाउँछ। एडेमोला एक एन्टी फ्ल्याश मनोवृत्ति को सबै भन्दा राम्रो उदाहरण हो।
फुटबलर एकपटक उसको घर जस्तो देखिन्छ कि भनेर आफ्नो इन्स्टाग्राम मार्फत प्रकट भयो। अडेमोला लुकम्यानको घर एक प्रमाण हो कि उनी महँगो जीवनशैलीको एक साँचो औषधी हो।
नाइजेरियन मूलका फुटबलर धेरै सानो जीवन जस्तो नम्र जीवन बिताउँछन् - फुलहमको साथ हप्तामा ,50,000०,००० पाउण्ड बनाउँदा पनि।
यो अडेमोला लुकम्यानको घर हो। कसैको लागि जो हप्तामा k०k पाउन्ड कमाउँछ।
अडेडोला लुकम्यानको कार:
जब म यो बायो लेख्छु, मोला जीवनको एक यस्तो चरणमा छ जहाँ उनी दुलहा मान्छे भएर विवाह समारोहहरूमा भाग लिन्छन्। के तपाईंलाई थाहा छ यदि त्यो तल एडेमोला लुकम्यानको कार हो? हो त्यो पछाडि ... चम्किलो मर्सिडीज बेन्ज। हाम्रो अनुसार, त्यो सवारी उसको हुन सक्छ, तपाईंले अवसरको लागि प्रयोग गर्नुभयो।
एडेडोला लुकम्यान पारिवारिक जीवन:
रुखो इ England्ल्याण्ड स्टारले उहाँसँगै उभिरहनेहरूलाई कहिल्यै बिर्सदैन जब उहाँ केही हुनुहुन्नथ्यो। यी व्यक्तिहरू परिवारका हुन्, आफ्ना आमा बुबा, भाइहरू, दिदीबहिनीबाट बनेका। हामी अहिलेसम्म उनको सफलतामा योगदान पुर्‍याउने प्रशिक्षक र टीमका साथीहरूलाई बिर्सेका छैनौं। तपाईको घरपरिवारमा तपाईलाई अरु तथ्यहरु पनि बताउन दिनुहोस्।
अडेडोला लुकम्यान अभिभावकको बारेमा:
हो, हामी जान्दछौं उसको आमा र बुबाले पहिले उनीहरूको छोरालाई वकील वा एकाउन्टेन्ट बन्न चाहेको लेन बनाए। हामीले उनीहरूको बारेमा पनि सुनें जब लुकम्यानले आफ्नो पहिलो EPL गोल एभर्टनको साथ गरेका थिए।
यस्तो देखिन्छ कि उनका आमाबुवाले खेलभन्दा पहिले उहाँलाई भनेका थिए, स्क्रिममा होइन जब उनले सिटी बिरूद्ध स्कोर बनाए। उनीहरूले उसलाई यसो गर्न भने घर पुग्दा - उनीहरूको उपस्थितिमा। भिडियो हेर।
अडेडोला लुकम्यान आफन्तहरूका बारे:
यानिक बोलासीका अनुसार, फुटबलर पेक्केम (लन्डन) को गाह्रो पृष्ठभूमिबाट आएको हो जहाँ बस्नको लागि एकदम कठिन थियो। हाम्रो अनुसन्धानबाट, एडेमोला पनि गाह्रो नाइजीरियाको जरा जस्तो देखिन्छ।
आफ्ना बाबुआमाको स्वीकृतिले उनी प्रायः दक्षिण पश्चिम नाइजेरिया भ्रमण गर्न जान्छन्, जहाँ उसका बुवा र आमा आउँदछन्। वास्तवमा लुकम्यान मित्रैलो छ। उसले पश्चिमी अफ्रिकी देशमा आफन्त र साथीहरूसँगको बन्धनको लागि समय फेला पार्दछ।
अडेडोला लुकम्यान नाइजेरियामा आफ्ना आफन्तहरूसँग सम्बन्ध गाँसेको देखेर खुसी लाग्यो।
अडेडोला लुकम्यान तथ्य:
हाम्रो जीवनीको यस अन्तिम अंशमा हामी तपाईंलाई पहिलेको एभर्टोनियनको बारेमा बढि सत्य कुरा बताउनेछौं। धेरै समय पर्खेर बिना, सुरु गरौं।
तथ्य # १ - औसत ब्रिटको तुलनामा अडेमोला लुकम्यानको फुलहम वेतन तुलना गर्दै:
Fulham 2020 वेतन ब्रेकडाउन
प्रति महिना £ 217,000
प्रति हप्ता £ 50,000
प्रति दिन £ 7,143
प्रति घण्टा £ 298
प्रति मिनेट £ 4.9
प्रति सेकेन्ड £ 0.08
यो पृष्ठ अवलोकन गर्नुभएदेखि, यो अडेमोला लुकम्यान हो Fulham संग कमाएको छ
के तपाईंलाई थाहा छ?… लन्डनमा औसत मानिस (जसले monthly k के मासिक कमाउँछ) फुलहमको साथ एडेडोला लुकम्यानको वार्षिक तलब बनाउन 38 68 बर्ष र months महिना लाग्छ।
तथ्य # १: खेल श्रेणीकरण:
अडेमोला लुकम्यानको प्रोफाइल एक अपग्रेडको योग्य छ, जुन उच्च हुनुपर्छ - दुबै समग्र र सम्भावित स्कोरहरूमा। के ऊँचाईमा अभाव छ, सुपरस्टार आफ्नो चपलता, सन्तुलन, dribbling र त्वरण को लागी बनाउँछ। सबै ईमानदारी मा, of२ को समग्र स्कोर र of 82 को सम्भावना निष्पक्ष हुनेछ।
तथ्य # १: जरिवाना:
अडेडोला लुकम्यानले आफ्नो क्यारियरको अवधिमा केही शानदार स्पटकिकहरू बनाए। हामीसँग ती मध्ये एउटा पेनल्टी छ जहाँ उसले गोलकीपरलाई पूर्ण रूपमा आउट गर्‍यो। यो त्यस्तो चीज हो जुन ऊ हतारमा बिर्सिएन।
तथ्य # १: अडेमोला लुकमेन धर्म:
बाँया विger्गर आमा-बुबाले उनलाई अभ्यास गर्ने क्रिश्चियनको रूपमा हुर्काए। हामीले उसलाई क्रस स do्केत गर्दै गरेको देख्यौं जब उहाँ मैदानमा प्रवेश गर्नुहुन्छ र गोलहरू गर्नुहुन्छ। अडेमोलाले पनि आफ्नो अ fingers्गाहरू आकाशमा देखाए जब उनले स्कोरहरू। उनको इन्स्टाग्राम बायो खाता पनि उनको विश्वासको लागि सूचक हो।
फुटबलि st स्टारडम प्राप्त गर्न को लागी दृढता देखाउँदै। यसले एडेमोला लुकम्यानको व्यक्तित्व परिभाषित गर्दछ - धेरै जसो एक परिश्रमीको रूपमा परिचित मानिस हुन्। बाँया विger्गरको बायोग्राफीले हामीलाई सिकाउँछ कि सफलताको बाटो ठूलो र दृढ कार्य हो।
बाल्यकालदेखि नै, फुटबलर बन्नु नै सब भन्दा ठूलो सपना हो। त्यहाँ कुनै वकिल वा लेखापाल बमोजिम गर्न चाहेको कुनै संकेतहरू थिएनन् जुन उसका आमा-बुबाले चाहन्थे। आज, लुकम्यानको परिवारले आफ्नो वि is्गर भएको मान्छेको पहिचान गर्नमा गर्व गर्दछ।
हामीसँग इ England्ल्यान्डको सबैभन्दा बहुमूल्य रत्नको जीवन कहानीमा बस्नुभएकोमा धन्यवाद। यहाँ Lifebogger मा, हामी वितरणको कार्यमा शुद्धता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं अंग्रेजी फुटबल खेलहरु.
कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाईंले केहि पनि देख्नुभयो जुन बायाँ वि in्गरको बायोमा राम्रो देखिदैन। अधिक, हामी टिप्पणी खण्डमा डिफेन्डरको बारेमा तपाइँको धारणा हामीलाई दिनुहोस् भने हामी खुसी हुनेछौं। अन्तमा, एडेडोला लुकम्यानको संस्मरणको छोटो सारांशको लागि, हाम्रो विकी तालिका प्रयोग गर्नुहोस्।
पूर्ण नामहरू: अडेमोला लुकम्यान ओलाजादे अलाडे आयलोला लुकम्यान
जन्म मिति: अक्टोबर १ 20 1997 XNUMX को २th औं दिन
जन्मस्थान: वान्ड्सवर्थ टाउन, लन्डन
अभिभावक जन्म स्थान: नाइजेरिया
राष्ट्रियता: संयुक्त राज्य
अभिभावक: बुबा (N / A), आमा (N / A)
Siblings: भाइ (एन / ए), बहिनी (एन / ए)
उचाइ: F फिट inches इन्च वा (१.5 मिटर)
शिक्षा: सेन्ट थॉमस पेकेहममा प्रेरित कलेज।
खेल्ने स्थिति: बाँया वि win्गर